Ny mombamomba anay farany.
Inona no atao hoe Polyimide?
Ny polymer dia voafaritra ho tambajotran'ireo molekiola be dia be ao amin'ireo singa miverimberina. Ny polyimide dia karazana polimeritra manokana, izay misy ny monomers imide. Ny polimisida dia tena maniry mafy indrindra amin'ny fanoherana ny hafanana, ny tanjaky ny mekanika ary ny fananana insulative. Inona no atao hoe Imide? Mba hahazoana ...
Inona no ampiasaina amin'ny polyimide? Ny polyimide dia ampiasaina amin'ny fantsom-pitsaboana, ohatra ny catheters vascular, amin'ny fanoherana ny tsindry vokatry ny fihenan-dàlana ary ny fanoherana simika. Ny indostrian'ny semiconductor dia mampiasa polyimide ho toy ny hafanana avo lenta; ampiasaina koa ho toy ny mpanenon-tena mekanika. ...
Amin'ny maha-fitaovana dielectric manintona azy, ny polyimide dia nampiasaina be teo amin'ny sehatry ny elektronika, aerospace, ary fiara izay nanatanteraka ny fitomboan'ny filàna afaka manao tsara amin'ny toe-piainana henjana, toy ny mari-pana avo lenta. Polyimides dia kilasy manan-danja amin'ny polim-pivoarana aingana ...